के नाकमा कागतीको रस हाल्दैमा कोरोना भाइरस हट्छ र ? भाइरल पोष्टको सत्यता जान्नुहोस् ! - नेपाल कुरा
के नाकमा कागतीको रस हाल्दैमा कोरोना भाइरस हट्छ र ? भाइरल पोष्टको सत्यता जान्नुहोस् !
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०७८, मंगलवार May 4, 2021 , संवाददाता: Yukta
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण अहिले सारा विश्व त्राहिमाम् त्राहिमाम् बनिरहेको छ । भारत लगायत विश्वको अवस्था अहिले डरलाग्दो भइसकेको छ । हरेक दिन लाखौं संक्रमित बिरामीहरू संसारभरि भेटिइ रहेका छन् । नेपालमा पनि यसले आफ्नो जरा गाडिसकेको छ । संक्रमणको बढ्दो प्रकोपका कारण मानिसहरूमा डरको वातावरण पनि पैदा भइरहेको छ ।
मानिसहरु आफ्नो सुरक्षा को लागी धेरै घरेलु उपचारहरु अपनाइरहेका देखिन्छन् । यो मात्र होईन, सोशल मिडियामा यस महामारीको बारेमा बिभिन्न अफवाहहरु फैलिरहेको छ । यस्तैमा सोशल मिडियामा एउटा पोस्ट आजभोली निकै भाइरल भइरहेको छ जसमा नाकमा कागतीको रस लगाएर भाइरसलाई तत्काल उन्मूलन गर्न सकिनेछ भनेर दाबी गर्दै गरेको देखिन्छ ।
सोशल मिडियामा भाइरल भइरहेको उक्त भिडियोमा यो दावी गरिएको छ कि यदि कागतीको रस नाकमा राखियो भने, कोरोना भाइरस तत्काल उन्मूलन हुनेछ । भाइरल उक्त भिडियोमा एक व्यक्तिले भनिरहेको छ कि ‘एक कागतीको रस नाकमा दुई वा तीन राख्नुहोस् र केबल ५ सेकेण्डमै कोरोना भाइरस हटाउनुहोस् । यही उपचार नाक, कान र घाँटी को लागि रामबाण उपाय हो ।’
भाइरल उक्त पोष्टमा त्यस व्यक्तिले दावी गरिरहेको छ कि यो उपचार ज्वरो भएका व्यक्तिमा पनि लागु हुन्छ । त्यतिमात्र होईन, उक्त व्यक्तिले दावी गरेको छ कि यसलाई प्रयोग गर्ने एकजना व्यक्तिको पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको छैन । अब यो भाइरल पोष्टको बारेमा पीआइबीको तर्फबाट उत्तर आएको छ । पीआईबीका अनुसार, भाइरल उक्त भिडियो पूर्ण रुपमा झूठो हो । किनभने त्यहाँ कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन कि कोभिड-१९ नाकमा कागतीको रस लगाएर हटाउन सकिन्छ ।
बीबीसीले पनि आफ्नो अनुसन्धानमा यस दावीलाई झूठो भनेको छ किनकि अहिलेसम्म कुनै स्वास्थ्य विशेषज्ञले यसको बारेमा केही भनेका छैनन् ।
भारतीय सेनाको टोलीलाई चिनियाँ सेनाले नियन्त्रणमा लिएको खुलासा
भ्रम फैलाउने भिडियोहरु युट्युवले आफै हटाइदिने